Hatramin’izay anefa dia fifidianana tsy mandany vola io ary fototra iaingan’ny taratasy ilain’ny fanjakana rehetra. Aminay, hoy izy, dia tokony hatao io raha tena manana ny fahavononany ny fitondrana ankehitriny. Nandeha ny fifidianana solombavambahoaka dia hita io kajikajy amin’ny fanovana sefo fokontany io, raha ny fanazavany. Dia izany foana ve no stratejia ? Aminay dia asan-devoly sy satanika izany, hoy izy. Voazimbazimba amin’izany ny zo fototra maha olona. Raha tena vonona sy sahy amin’ny maha lanim-bahoaka azy ny fitondrana, hoy izy, dia io fifidianana tsy mila CENI sy HCC io no atao voalohany fa amin’ny faran’ny oktobra dia efa hipetraka ireo prezidam-pokontany ireo.